विश्वकपको आजको खेल स्पेन बिरुद्द पोर्चुगल, रोनाल्डो विरुद्ध रामोस कसले मार्ला बाजी ! || सुनौलो नेपाल
विश्वकपको आजको खेल स्पेन बिरुद्द पोर्चुगल, रोनाल्डो विरुद्ध रामोस कसले मार्ला बाजी !
काठमाडौं, ०१ असार । विश्वकप फुटबलअन्तर्गत शुक्रबार पोर्चुगल र स्पेनबीच बहुप्रतीक्षित भिडन्त हुँदै छ । उपाधि दाबेदार मानिएको स्पेन र पोर्चुगलबीचको प्रतिस्पर्धालाई क्रिस्टियानो रोनाल्डोविरुद्ध सर्जिओ रामोसको भिडन्तका रूपमा समेत हेरिएको छ  ।
जबकि दुवै स्टार खेलाडी रियल म्याड्रिडबाट व्यवसायिक फुटबल खेल्दै आएका छन् । मैत्रीपूर्ण खेलमा पोर्चुगलको प्रदर्शन औसत रहे पनि युरो च्याम्पियन पोर्चुगललाई पहिलोपटक विश्वकप जित्नुपर्ने चुनौती रहँदा २०१० पछि दोस्रोपटक स्पेन उपाधि यात्रामा छ ।
तर, विश्वकप सुरु हुन एक दिनअघि मात्र प्रशिक्षकलाई बर्खास्त गरेको स्पेनको रणनीति कस्तो हुने भन्ने अन्योलता रहने सम्भावना बलियो छ ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो र रामोस रियल म्याड्रिडमा रहँदा निकै नजिकका मित्रहरू हुन् । तर, शुक्रबार मध्यरातको ९० मिनेट एक अर्का्विरुद्ध देशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
ट्याकलका लागि निकै माहिर मानिने रामोसले रोनाल्डोलाई कसरी रोक्लान् भन्ने चासो सर्वा्धिक बढी छ । त्यस्तै, रोनाल्डोले पनि रामोसलाई चिर्दै गोल गर्नु कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन ।